Ururka ONLF, oo Xafiis ka Furan Doona Magaalada Addis Ababa – Rasaasa News
Dec 14, 2010 Eritrea, ethiopia, Ogaden, oo Xafiis ka Furan Doona Magaalada Addis Ababa, peace in ethiopia, peace in ogaden, somalia, Ururka ONLF
Warar xog ogaal ah oo aanu ka soo xiganay xubno ka tirsan ururka ONLF, oo jooga degaanka Somalida, ayaa sheegaya in dhawaan uu xafiisyo ka furan doono ururuku dhamaan gabalada degaanka Somalida iyo magaalada Addis Ababa.
Ururuka ONLF, ayaa la galay xukuumada dhexe heshiis nabadeed oo la doonayo in nabad lagu soo dabaalo dhamaan degaanka Somalida Ogadeeniya, oo ay dagaalo ka socdeen 16 sano oo xidhiidh ah. Ururka ONLF,ayaa kolkii uu saxiixay heshiiska nabadeed ay dawlada dhexe ku heshiiyeen in ururku uu sii wado hawlaha nabada ee gudaha iyo dibada, ka hore inta uusan u xuub siiban rabitaankiisa siyaasadeed ee ah in uu ka qayb galo talada dalka.
Waxaa uu ururuku muddo ku jiray wada tashi dawlada dhexe ah iyo sidii uu u bilaabi lahaa hawlaha nabadaynta ee loo baahan yahay. Ururka ayaa waxaa uu magacaabi doonaa dhawr xafiis oo ka garab shaqeeya dawlad degaanka Somalida, kana hawlgali doona dhamaan gabalada dalka si uu u dhamaystiro hawlaha nabada.
Ururuku, wuxuu wax ka qaban doonaa, hubinta iyo uruurinta ciidamadii hore u yimid ee jabhada iyo in uu soo xareeyo inta yar ee ku dhiman duurka ee ka cabsanaya in waxyeelo loo gaysto. Waxaa kale oo uu ururuku doonayaa in la sii wada daayo dhamaan maxaabiista xidhan, kuwii la sii daayeyna dib loo helo, si loogu abuuro meherado ay ku dhex gali karaan shacabka.
waxaa kale oo uu ururku ku hanweyn yahay in uu dib u soo celiyo dadka qaxootiga ah ee ku jira xeryaha dalalka dariska ah, iyada oo lala kaashanayo hayada UNCHR, iyaga oo dib u dajin loogu samayndoono meelaha ay dalka ka doortaan.
Xubinka warbixinta nasiiyey ayaa sheegay in loo baahan yahay in aanu dhamaystiro anaga, dawlada dhexe iyo dawlad degaanka Somalida waxyaabihii lagu heshiiyey ee nabadaynta, iyada oo laga dhabaynayo wax u qabashada shacabka, dibna bulshada loogu dhexdaro dadkii awal hore ku hawlanaa dagaalada.
Waxaa uu xubinku intaas ku daray in ururuka ONLF, xubnihiisu ayna u soconin in ay jagooyin ka helaan dawlada degaanka balse ay doonayaan in ay u dhaxeeyaan hubiyaana si ay kalsooni ugu abuuraan shacabka, ciidamdii Jabhada ee nabada ku yimid iyo waliba in ay keenaan dadka wali shakisan. Waa khasab in ay shaqooyin helaan xubnaha aan dibadaha deganayn ka dib kolka ay bartaan shuruucda dalka ayuu yidhi xubinku.
Dawlada dhexe waanu isku afgaranay in aanu tagno gabalada oo dhan anaga oo iskaashanayna dawlada degaanka iyo dawlada dhexe. Waxaa kale oo aanu socdaalo ku tagi doonaa dibadaha si aanu warbixin u siino qurbo joogta wali shakisan, oo aanu uga dhaadhicino isbadalka wanaagsan ee yimid tan iyo intii aanu nabada qaadanay.
Mar aanu waydiinay xidhiidhka u dhaxeeya iyaga iyo dawlad degaanka Somalida, waxaa uu ku gaabsaday xubinku, “dawlad degaanka Somalida heshiis lama aanaan galin dawlada dhexe ayaanu heshiis wada saxiixanay.”
Si kastaba ha ahaatee waxaad moodaa in hawlaha nabadu ay u dhaxayso dawlada dhexe iyo ururka nabada qaatay ee ONLF, loona baahan yahay sidii loo dhamaystiri lahaa. Dawlada degaanka Somaliduna ayaa aad isugu mashquulinaysa sidii ay xidhiidh wanaagsan ula yeelan lahayd dadka qurbo joogta ah iyada oo ku bixinaysa lacago badan. Dadweynaha Degaanka Somalida ee dibadaha degan ma ah kuwa u baahan wax u qabasho, laakiin dadweynaha degaanka iyo dadka hubka dhigay ee nabada qaatay ayaa u baahan wax u qabasho dhab.
Isbadal la,aan ka shaqaynta nabada oo ka timaad dhinaca dawlada dhexe iyo Dawlada degaanka Somalidu waxaa ay badeelayn doonaan nabadiid hor leh oo abuurma iyo in ay dib u soo kacaan kuwii hore nabada u diiday. Arintaas oo khatar ku abuuri khatar nabad daro hor leh oo ka dhalata degaanka oo ay garab u noqon doonaan dawladaha ay colaadu ka dhaxayso dalka Itobiya ee ay ugu horayso shacbiya iyo kuwa bariga dhexe ah.